डडेल्धुराको परशुराममा भैँसी खरिदमा अनियमितता! - Unity Khabar
डडेल्धुराको परशुराममा भैँसी खरिदमा अनियमितता!
लागत स्टिमेट तयार गर्ने नै बेखबर
✍️ हर्क चन्द	 प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०७८, सोमबार १३:२०
डडेल्धुरा: डडेल्धुरामा भैँसी खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। जिल्लाका परशुराम नगरपालिका–५ परिगाउँमा गरील भैँसी पालन समूहले अनियमितता गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका हुन्।
प्रति भैँसी ८० हजार पर्ने भएपनि गरील भैँसी पालन समूहले एक लाखमा खरिद गरेको स्थानीयको आरोप छ। समितिले आफ्नो स्वार्थपूर्तीका लागि धनगढीको केसी डेरी, गाईभैँसी फर्ममा ८० हजारमा पाइने भैँसीलाई कञ्चपुरको शिद्धबाबा गाईभैंसी पालन तथा दाना उद्योगबाट एक लाखमा खरिद गरेको स्थानीय धर्मदेव ओझाले बताए।
उनले धनगढीको केसी डेरी, गाईभैँसी फर्मले ८० हजारमा दिएपनि खरिद गर्न नदिएर कञ्चपुरको शिद्धबाबा गाईभैंसी फर्मबाट खरिद गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार एकै जातको भैँसी भनेर फरकफरक जातको भैँसी दिएको बताए।
लागत साझेदारीमा भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्र्तगत संघ सरकारबाट २१ लाख ८० हजार, प्रदेश सरकारबाट २५ लाख, स्थानीय तहबाट २१ लाख ८० हजार र समूह तथा किसानबाट १४ लाख ४७ हजार ४ सय ८० गरी जम्मा ८३ लाख ७ हजार ४ सय ८० रूपैयाँमा भैँसी खरिदको लागि लागत संकलन भएको थियो।
जसमध्ये समूहले ५२ लाखमा ५२ भैँसी मुर्रा प्रति १ लाख परेको लागत स्टिमेटमा देखाएको छ। राँगो खरिद तथा गोठ व्यस्थापनमा १ लाख २० हजार, पशु बिमा १३ सय ७० प्रति भैँसी गरि ५२ भैँसी ७२ हजार ६ सय १०, ढुवानी प्रति भैंसी ५ हजारका दरले २ लाख ६५ हजार, एआई समाग्री र नाईट्रोजन खरिद एक लाख, घासँको बिउ खरिद तथा घाँस विकास ५० हजार, च्याप कटर १ प्रति १० हजारका दरले ५२ को ५ लाख ४६ हजार देखाएको छ।
यस्तै तालिम २ लाख, लिटरमा नाप्ने भाँडा २ हजार, गोठ सुधार १० लाख ४० हजार, औषधी खरिद ७० हजार, समूह गठन १० हजार, अनुगमन बैठक तथा दैनिक भ्रमण भत्ता २ लाख २५ हजार, स्टेशनरी ५२ हजार ८ सय, मिल्क क्यान २ वटा ३० हजार, इन्धन ५० हजार ९ सय ९०, मिल्क क्यान ५२ वटा ५२ हजार कम्प्युटर मर्मत र पे्रन्टर मर्मत १८ हजार ६ सय होडीङ बोर्ड निमार्ण १० हजार, सार्वजनीक सुनुवाई ५० हजार लागेको लागत स्टिमेटमा देखिाएको छ।
गरील भैँसी पालन समूहले ४६ मुर्रा भैँसी शिद्धबाबा गाईभैंसी पालन फर्मबाट एक लाखका दरले खरिद गरीएको छ भने त्यस्तै खालको भैँसी धनगढी फर्मले ८० हजारमै दिने बताएको समितीकै एक सदस्यले बताए।
‘यसले बिल मिलाएर समितीले अनियमितता गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘म आफै धनगढीको भैँसी र्फम गएर ८० हजारमा लिएर आउँछु भनेको थिए। तर, समितिका साथीबाटै एउटै र्फमबाट एक लाख नै हाल्नु पर्छ भन्ने दबाब आयो। र, एक लाखमै खरिद गरे।’
धनगढी र्फममा पुगेका समूहका सदस्य ओझाले भने, ६ मुर्रा भैँसी ल्याए समूहको दवाबले एकलाख नै तिर्नु परेको छ। उनले भने, ‘हिसाव–कितावमा अनियमितता भएको छ। मिलाउनुहोस् भनेका छौँ। नमिले अख्तियारमा जान्छौँ।’
समूहका पदाधिकारीहरूले अनियमितता गरेको समूहका सदस्यहरूले थाहा पाएपछि अहिले किसानबाट लिएको २५ हजार फिर्ता दिने निर्णय गरेको समूहका सदस्य दानसिह बिष्टले बताए।
लागत साझेदारीमा भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रममा जसको घरमा दुई भैँसी छन्। त्यसलाई समूहबाट थप एक भैँसी दिने भन्ने नियम बनाइएको छ। सुरूमा फर्म भर्दा घरमा दुई भैँसी नभएकोलाई भर्न नदिएपनि पछि भने, गरील भैँसी पालन समूहले घरमा भैँसी नभएकोलाई समेत भैँसी वितरण गरेको कृषक विरबहादुर साउँदले बताए।
उनले समूहका मानिसले आफ्नो नजिकका मान्छेलाई भैँसी वितरण गरेको बताए। भैँसी खरिद गर्दा मनोमानी ढङ्गले खरीद गरेर आफूहरूलाई ढाटेको उनको भनाइ छ। घरमा एउटा भैँसी भएकोलाई भैँसी दिनु भन्दा नदिएको कृषक हरि नाथले बताए।
समृहका सदस्य धनबहादुर सिँहले भैँसी खरिद गर्दा खरिद समिती नबनाएको बताए। ‘सुरूमा अध्यक्ष ज्युलाई सोध्दा प्रति भैँसी एक लाख १९ हजारमा खरिद गरेको भन्थे। तर, लागत स्टिेमेटमा भने प्रति भैँसीको एकलाख देखाएको छ,’ उनले भने।
व्यवसायीक भैँसी पालन गर्ने हेतुले कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको भएपनि भैँसी खरिद गरेको पन्ध्र दिन नबित्दिै भैँसी बिक्री गर्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ। एक लाखमा खरिद गरेको भैँसी बिरामी भएको भनेर कृषक दशरथ जोशीले २५ हजारमा बिक्री गरेका छन्।
परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरूले स्टिमेट बनाउने आफूहरूको काम भएकोले बनाएको बताए। भैँसी खरिद प्रक्रियाका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको र पशु साखामा गएर बुझ्न उनले आग्रह गरे।
‘नगरपालिकाले ल्याएको होइन। पशु साखाले पनि ल्याएको होइन्। खरिद गर्ने काम समूहको हो। सस्तोमा खरिद गरोस् वा महङ्गोमा समूहको जिम्मेवारीमा पर्दछ,’ उनले भने, ‘गुनासो आएपछि अब अनुगमन हुन्छ।’
पसु सेवा साखा जोगबुढाका पसु चिकित्सक रतनबहादुर भण्डारीले आफ्नो कामस्वास्थ्य परिक्षण गर्ने मात्रै भएकोले अन्य जानकारी नभएको बताए।
चन्द युनिटी खबरका संवाददाता हुन्।
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार १२:२७
२ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०७:१६
सबै दल एकजुट भएर कोरोना नियन्त्रणमा लाग्न प्रधानमन्त्री…